Sigxile imininingwane photographer Andreas Gursky
Lo mculi abanamakhono bayaziwa kuwo wonke umhlaba njengoba umlobi we isithombe eqolo. Uthanda ukudubula izixuku, ezinkulu nemisebenzi yakhe futhi kukumangaze ukuthi lingakanani. Nokho, akukho ukunyakaza ezithombeni zakhe akusho, umlobi othanda ukuba liyobamba emhlabeni kwansuku zonke. isitayela umdwebi sika liyabonakala phakathi izinkulungwane imisebenzi: inhlolovo eyenziwe nge iphuzu esiphezulu kanye ukuthungwa isibhamu sakhe cishe palpable.
Zagxilisa kusukela ebuntwaneni uthando izithombe
Umbhali izithombe omkhulukazi wazalwa ngo-1955 e Dusseldorf. Uyise eyingoduso ekukhangiseni izithombe, umfana imbibed kusuka ebuntwaneni uthando ubuciko, banezimfanelo amakhono kwesokudla futhi ufunde wonke amaqhinga skill.
Ngemva kokuphothula umatikuletsheni, Andreas Gursky bajwayelane bendabuko obubhalwe izithombe eNtshonalanga Jalimane isikhungo ezikhethekile. Kwakuwuhambo ubuciko ezahlukene - kukulandzelela kwemalanga onkhe ukuphila okuvamile, elingenalo lwaluthintwa yokukhangisa.
Ngesikhathi ngisafunda e-Art Academy of Dusseldorf inzuzo isipiliyoni Master wahlangana abasunguli German avant-garde, okuyinto ukuthonywa umsebenzi wakhe esikhathini esizayo.
Ngasekupheleni kwawo-80-yalolucwaningo ka elidlule leminyaka umthwebuli Andreas Gursky ukuthola yenanelwa izithombe engavamile, waqaphela "slozhnosochinennogo" lapho abakhona ukugcwaliswa imibala nemininingwane emihle. Lapha, nika play okugcwele isitayela kombhali genius isiJalimane, kahle ohambisa zeitgeist yesimanje.
Master beyofuna imvelo entsha uye wahambela cishe umhlaba wonke, waya kubantwana bakwa-emakhoneni kude le planethi. Wakhuluma imininingwane futhi azikaze zibonwe abanye bezithombe.
Kancane kancane, isihloko imisebenzi yakhe ezihlobene nohambo imidwebo, washintsha kuya entsha. Its nesithakazelo kakhulu aesthetics giant izitshalo zezimboni, izakhiwo Ihhovisi nasezindaweni ezigcina impahla.
Ukunakwa main - imininingwane
Andreas Gursky izimisele ukukhombisa asathuthuka ngokushesha lapho iyunithi womuntu angenagama. Kusukela ekuqaleni kwenkonzo yakhe, umdwebi alalelwa okukhulu ukuze imininingwane ezincane -panorama ukudubula, ethi "uNkulunkulu omkhulu ezibalulekile ukubonwa kude."
On the emidwebweni izithombe ke okuhambisa ukonakala, angaboni ukuphakama osizungezile, ngokukhetha engela kwesokudla. Kwadingeka asebenze kanzima edonsa ngo-Andreas Gursky kuyinto ukudluliswa ngokuphawulekayo isixuku madding, uthatha isinyathelo abalazi umbukeli. Izintuthwane kancane abantu emsebenzini isimiso, kuphi futhi kwandisa ukuphila kwabo.
Namathafa njengemisebenzi yobungcweti
Nokho, hhayi nje kuphela umuntu ugxilisa ukunaka kwakhe umbhali. Ubonisa emangalisayo indawo yemvelo, futhi sidlule ubuhle ngokubabazekayo ngesilinganiso ekhethekile, umlobi isebenzisa format izithombe ezinkulu ukuthi kungaba inyatheliswe ezimweni ezijwayelekile kuphela izingxenye.
Mayelana umsebenzi wakhe, u-Andreas Gursky uzwakalise bha: "Angazi ongaphika hhayi imvelo namaqiniso. Indalo yami ikude ke. "
Kungaba uyibize ngokuthi photographer abavamile, ngoba yonke imisebenzi yakhe umculi izibambo ezinhlelweni ezikhethekile. Wakwenqaba ngokushesha amafomu bendabuko yobuciko, baqala ukuletha umsebenzi wabo ezingeni yale midwebo yangempela.
Ubukhulu basebenze badlale nezethameli
Gursky othanda ukusebenza nezakhiwo ezinkulu, ugcizelela ukuthi emikhulu yayo isebenza akubonakali nje kuphela kuleyo ndawo, kodwa ekude.
Wayebonakala ukuba ukudlala izethameli, ukunikela catch imfumbe engafinyeleleki. Ngokwesibonelo, umsebenzi abadumile ethandwa kakhulu uchungechunge "Bangkok" nge umfanekiso nomfula, okuyinto owuthanda surface bushelelezi.
Nokho, amanzi ahlanzekile okuyiso ezingcolile, lapho sintanta ngepulasitiki bese iphepha udoti, futhi umbukeli akusho ngisho ukuthi kungani yena akazange ukubona ngokushesha.
mass womuntu Faceless
I photographer esidumile Andreas Gursky udlala ngezindlela ezihlukahlukene futhi libonisa ukuthi iso abajwayelekile abakwazi ukubamba. I-panorama volumetric uyasusa usuka endaweni ephakeme kakhulu noma ibanga elikhulu, futhi abantu izithombe avele izidalwa azikubheki baziqhubekela nemisebenzi yabo evamile.
Akekho abheke ikhamela, futhi kuphela kakhulu ekusondelaneni angabhekwa inhlangano homogenous.
Kukholakala ukuthi ngisho photographer olulodwa akusho zizuze imali eningi kakhulu ngomsebenzi wakhe. Master, owaqala kudala ukuba bahlanganyele art ngokoqobo show, nakukucabanga ukuthi umsebenzi wakhe empeleni iyokwaziwa ngisho emhlabeni wonke, futhi abaningi babo, uyobe uthole isimo fabulous.
isithombe sakhe ngokuthi "amasenti 99" wahamba endalini ngo-2007 i-irekhodi isamba ngempela. Billionaire Ukrainian wathenga umsebenzi Kiev kwebuciko dollar angaphezu kwezigidi ezintathu.
Isithombe edume kakhulu futhi kuyabiza
I ezibizayo kakhulu incwadi yakhe yabangela inguquko Umdwebo emfuleni Rhine phakathi kwamadamu amabili (Rhein II). esibhakabhakeni Gray phezu kwamanzi kugunyazwe zaphelela ku-Photoshop, futhi nakuba abaningi Umdwebo akusho umxhwele, eyathengwa ngu ongaziwa ngenani okweqa amadola ayizigidi ezine ngonyaka.
Andreas Gursky ugcizelela emisebenzini yakhe ukuba ihlukane ezithile ekuphileni, okubonisa ngokoqobo umbono kweso lenyoni. Nokho, ngisho nangemininingwane emincane kakhulu ephunyuka iso lakhe. Ngenxa zinendlela static liyabonakala phakathi imisebenzi eminingi, inkosi ayedumile wakhe, nemisebenzi yakhe Sekuyisikhathi eside kubhekwe imisebenzi yobuciko.
Usomahlaya Igor Mamenko: Biography, empilweni yakho, nobuciko kanye amaqiniso athakazelisayo
Steven Bauer: Biography, umsebenzi, impilo siqu
Ubani umdali "Microsoft" (Microsoft Corporation)? U-Bill Gates ne-Paul Allen - abadali "Microsoft". Umlando ne-Microsoft logo
Umqondisi Alexander Veledinsky: Biography futhi Filmography
Umlingisi Yankovsky Rostislav Ivanovich: Biography, izindima amaqiniso athakazelisayo
Kenzo Takada: Biography, ukuphila siqu, izithombe
UTolstoy sika imisebenzi engcono ezinganeni. ULeo Tolstoy: izindaba izingane
Uma une amazinyo ngoba ukugcwaliswa yesikhashana kuzosiza Metrogil Dent (Iziyalezo yokusetshenziswa)
Yevgeny Stepanov, Soviet fighter umshayeli: Biography
Indlela ukukhetha ihholo idili umshado eMoscow
Uhlelo Business: shawarma ethengiwe. Izibalo kanye nemiyalelo inhlangano ibhizinisi
Isithonjana "umkhululi" uNina kaNkulunkulu
Bonisa Siam Niramit, Phuket Izibuyekezo
Ukudla isimame E 450: pyrophosphates. Izithako Iyingozi
Izinhlobo isihlabathi, izici zawo, kukhiqizwa futhi kusetshenziswa